Shirkado interneetka bixiya ayaa xayiray shabakada wararka ee Hadhwanaagnews
Create by Human Rights Center: 03 Jan 2016
Shirkadaha Somcable iyo Somtel ee bixiya adeegga interneetka ayaa xayiray shabakadda wararka ee Hadhwanaagnews tan iyo 2dii January 2017. Hadhwanaag hada ma geli karaan dadka isticmaala interneetka Somcable iyo Somtel oo ah shirkado gaar loo leeyahay.
Hadhwanaag waxa la xayiray kadib markii ay daabacday war sheegaya in mulkiilaha Somcable, Mohamed Saed Guedi, inuu taageero dhaqaale siiyo xisbiga talada haya ee Kulmiye. Somcable waxaay Hadhwanaag u sheegtay inay warkaas ka saaraan bogooda.
In shirkad interneetka bixisaa ay xayirto warbaahin waxaay sii xumaynaysaa xaaladdda suxufiyiinta Somaliland oo marka horeba ku shaqeeya deegaan aan soo dhowaynayn. Waa arin aad looga walaaco in shirkadaha bixiya adeegga interneetku ay la saftaan dawladda si ay u cabudhiyaan saxaafadda.
Falka ay ku kacday Somcable waa mid aan la aqbali karin oo halis ku ah xorriyadda saxaaafadda. Xarunta Xuquuqal Insaanku si adag ayay u canbaaraynaysaa isku dayga ay Somcable ku doonayso inay gacanta ku dhigto wartebinta warbaahinta madaxa banaan. Xaq uma laha Somcable iyo Somtel inay sharciga gacantooda ku qaataan.
Dastuurka Somaliland wuxuu damanaad qaaday madax-banaanida saxaafadda wuxuuna mamnuucay wax kasta oo lagu cabudhinayo saxaafadda, sida ku cad qodobka 32aad ee dastuurka. Dastuurku wuxuu sidoo kale mamnuucay faro-gelinta xidhiidhada gaarka ah.
Xaruntu waxaay u soo jeedinaysaa Somcable iyo Somtel inay ka qaado Hadhwanaag xayiraadda oo ay joojiyaan faaf-reebka.